Guddoomiyaha G/Banaadir oo ka codsaday Golaha Wasiirada in 10% loo kordhiyo dakhliga Gobolka - Caasimada Online
Home Warar Guddoomiyaha G/Banaadir oo ka codsaday Golaha Wasiirada in 10% loo kordhiyo dakhliga...
Guddoomiyaha G/Banaadir oo ka codsaday Golaha Wasiirada in 10% loo kordhiyo dakhliga Gobolka
Muqdisho (Caasimada Online) Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Mudane Xasan Cali Kheyre. Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Sharciga la Dagaalanka Argagaxisada, go’aan laga gaaray dhismayaasha u dhow dhabaha diyaaradaha ku soo degaan, warbixino laga dhageystay Guddoomiyaha Gobolka Benadir iyo Hanti-Dhowrka Guud ee Qaranka iyo arrimo kale.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa markii u horeysay ka qeyb galay kulanka khamiislaha ee Golaha Wasiirada, kaasoo uu shir guddoominayay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre.
Guddoomiye Taabid ayaa uga warbixiyay Golaha Wasiirada xaalada gobolka, dhinacyada amniga, horumarka iyo caqabadaha jira, isagoo faah faahin ka bixiyay waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii xafiiska ula wareegay.
Waxaa uu sheegay in Maamulka Gobolka Banaadir uu u adeego 25% shacabka Soomaaliyeed, isagoo soo hadal qaaday dakhliga 15% ee ay ka helaan Dekeda.
Guddoomiyaha ayaa ka codsaday Golaha Wasiirada in 10% loogu kordhiyo dakhliga, lana gaarsiiyo 25%, si loo hagaajiyo adeegyada aas aasiga ee ay u baahan yihiin muwaadiniinta.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa todobaadkii hore daah furay hanaanka maareynta Maaliyadda Dadweynaha, kaasoo ah nidaam casriga ah oo lagu maamulayo miisaaniyada iyo isticmaalka qarashaadka Dowladda Hoose.
15% kaliya ayaa Dakhliga Dekedda Xamar laga siiyaa G/Benaadir. Si loo horumariyo adeegyada waxaan codsanay kordhin qoondo si ay u noqoto 25% pic.twitter.com/5AqNyibdHF
— Thabit (@ThabitMhd) August 17, 2017
Gobolka Banaadir ayaa dhaqaalaha uu ka helo Dekeda Muqdisho ku maareeya howlaha iyo adeegyada kala duwan ee dowladda hoose, waxaana maamuladii hore ee gobolka soo maray ay ka heli jireen Dekeda Muqdisho Dakhli dhan 15%.